ZTE Axon 10 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
ZTE Axon 10 Pro: Ekwentị mbụ nke ika ahụ nwere 5G
Edere Ferreno | | Mobiles, ZTE
ZTE achọghị ịhapụ mbipụta 2019 nke MWC na Barcelona. Na ihe omume ahụ, akara ahụ hapụrụ anyị na ama ọhụụ ya, Axon 10 Pro. A kwuolarị ya izu ole na ole gara aga na ngwaọrụ ahụ a ga-ewepụta ya na MWC 2019, ihe mechara mee. Ngwaọrụ a pụrụ iche maka akara ahụ, n'ihi na ọ bụ nke mbụ dị na ntanetị iji nweta 5G n'ahịa.
Site na mbido, akara ahụ egosila ebumnuche ya ịbụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na 5G. Ugbua afọ gara aga ha kwupụtara atụmatụ ha maka ịmalite ụdị na nkwado a na ahịa. Nke mbụ n’ime ekwentị ndị a mechara bụrụ onye nwe ọrụ. N'ihi na ZTE Axon 10 Pro adịlarị n'etiti anyị. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị?
Dị ka ọ bụla 5G smartphones dị ugbu a, ma e wezụga maka Huawei Mate X, ngwaọrụ abịarute na Snapdragon 855 dị ka gị processor. Yabụ anyị nwere ike ịtụ anya nnukwu ike n'aka gị n'ihe gbasara arụmọrụ.
1 Nkọwa ZTE Axon 10 Pro
Nkọwa ZTE Axon 10 Pro
Na usoro nke imewe, na Chinese ika na-agba mbọ ka a ihuenyo na ọkwa na ọdịdị nke a dobe mmiri. Yabụ soro usoro ahịa na nke a, na nke a Axon 10 Pro. Na teknụzụ ọ bụ ọkwa dị elu, nke akara a na-atụ anya ịlaghachi n'ahịa mgbe ọtụtụ nsogbu tara ahụhụ na 2018 site na mgbochi America.
Nka na ụzụ nkọwa ZTE Axon 10 Pro
Nlereanya Axon 10 Pro
Ihuenyo AMOLED 6.4 Inch Full HD
Nhazi Snapdragon 855
Nchekwa n'ime 128GB (gbasaa ruo 512GB na microSD)
Igwefoto na-aga n'ihu 48 MP + 20 MP (Wide) + telephoto x5
Igwe n'ihu 24 MP
Njikọ 5G Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac LTE
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ ike na ihuenyo
Batrị 4.300 mAh na ngwa ngwa
Akụkụ 167 x 72 x 8.2 mm
Ibu ibu 180 grams
Na nke a Axon 10 Pro nke ika anyị na-ahụ Qualcomm Snapdragon 855 n'ime. Ọ na-eji modem X24, maka 4G nke na-abịarịrị nwa afọ. Ọ bụ ezie na X50 agbasoro bọọdụ ekwentị, nke mere na o nweela njikọta 5G na ya. Ngwaọrụ mbụ nke ika ndị China nyere ndị ọrụ a nkwado a.
Maka GPU Adreno 640 ka ahọrọla na ngwaọrụ ahụ, nke na-enye ike dị ukwuu n'akụkụ a. Na mgbakwunye inwe igwe ọgụgụ isi si na Qualcomm. A na-atụ anya na ọgụgụ isi dị iche iche ga-enwekwa ọnụnọ na igwefoto ngwaọrụ ahụ, yabụ a ga-emeziwanye ha n'ụzọ a.
Ejikọtara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo,, dị ka anyị na-ahụ n'ọtụtụ ụdị n'ime njedebe dị elu ugbu a na gam akporo. O nwekwara mmeghe ihu, maka igwefoto n'ihu ngwaọrụ ahụ. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ ewebatala ụfọdụ isi ọrụ n'ihi ọnụnọ gam akporo gam akporo, dị ka batrị mara mma ma ọ bụ njikwa mmegharị.
ZTE Axon 10 Pro biara na igwefoto okpukpu atọ. Ọtụtụ ụdị na MWC 2019 a na-ahapụ anyị ụdị nwere igwefoto azụ okpukpu atọ kwuru, ihe a na-emegharị na akara ndị China. Isi bụ 48 MP, ebe anyị nwere 20 MP n'obosara n'akụkụ na nke atọ a 5x ngwa anya mbugharị, onye mkpebi na-amaghị na oge. Na mgbakwunye, n'ihi ọgụgụ isi, anyị ga-enwe ọnọdụ ọgbaghara, mbugharị anya, na nnwale ijegharị na igwefoto ndị a.
Anyị na-achọta otu ụdị nke njedebe a, na usoro nke RAM na nchekwa dị n'ime. Maka ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ enyeghị anyị ụbọchị a ga-ewepụta maka ZTE Axon 10 Pro a. Ekwuola na ọ ga-adị na Europe oge na ọnwa isii mbụ n’afọ. Ọ ga-abata na June, dị ka ụdị 5G ndị ọzọ ewepụtara.
Anyị enweghị data na ọnụahịa ị ga-enwe ọkọlọtọ ọhụrụ a mgbe ọ bịarutere n'ụlọ ahịa. Anyị na-atụ anya ịnụkwu banyere nke a na ụbọchị ịwepụta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE Axon 10 Pro: Ekwentị mbụ nke ika ahụ nwere 5G
Galaxy A50: Samsung n'etiti ọhụrụ
Samsung weghachite Galaxy S nso n'afọ ọzọ